ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့!
သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ဆိုက်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်ရက်စွဲများ၏မြို့အတွက် ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသိုင်းဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ သင်လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏မြို့အတွက် နှင့်အခမဲ့ထိုသို့ပြု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာများ၊ဥပဒေကြမ်းများနှင့်ကန့်သတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာ၊လူအချင်းချင်းတွေ့ဆုံထဲသို့မဝင်နှင့်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ဆိုက်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်ရက်စွဲများ၏မြို့အတွက် ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသိုင်းဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအများအတွက်ရှာဖွေနေသူတို့အဘို့အအစစ်အမှန်ကလူကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက် ၊ဝမ်။ ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်သာအင်တာနက်ပေါ်နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး၊ထို့နောက်ရပ်တန့်တုန်းအချိန်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့နှင့်အလွန်အနည်းငယ်အချိန်။ ထွက်ရှာတွေ့သောသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအများအတွက်ရှာဖွေနေသူတို့အဘို့အအစစ်အမှန်ကလူတွေ့ဆုံရန်မှလူ ၊ဝမ်။ ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်သာအင်တာနက်ပေါ်နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး၊ထို့နောက်ရပ်တန့်တုန်းအချိန်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့နှင့်အလွန်အနည်းငယ်အချိန်။ ထွက်ရှာတွေ့သောသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်။
ချိန်းတွေ့နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းကလေးများအတွက် အင်တာနက်ကနေတဆင့်အတူ၊များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၊ရှည်လျားပြီးအစိတ်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သငျသညျကွားနိုငျအများကြီးဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအကြောင်းနိဒါန်းအင်တာနက်ကနေတဆင့်သင်ကူညီပေးရှာတစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းစုေပါင္း ၅၈ အခါ၊ထောင်ကြာထက်လျော့နည်း။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍကကစားသေချာအတွက်အလိုက်ဖက်၏။ ချိန်းတွေ့ဆိုက် စာတွေ့လိမ့်မည်သင်တို့အဘို့အအမှန်တကယ်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်အား၊နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်အများဆုံးအဆင်သင့်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပေးအကဲဖြတ်မှု၏သဟဇာတအလူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသင်နှင့်ဆောင်ခဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်အသစ်တစ်ခုအဆင့်၊နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်များမှာ။ အမျိုးသမီးများစွာရှိခဲ့ ကာလ၏အသက်တာ၌အခါသင်အမှန်တကယ်ချင်မှတွေ့ဆုံရန်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အညာဘက်လူကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးအားကြီးသောဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်မဖွံ့ဖြိုး။ အသွင်အပြင်၏လှပသောမိန်းကလေး:ဆံထုံး၊ကောင်းစွာဝတ်ဆင်နှင့်အတူ၊အလှအမူ၊အစွမ်းထက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှု။ သူမြင်သောအခါလူတို့အာရုံစိုက်ပေးဆောင်နေကြ၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးထပ်မံချိန်း၏ကိုတွင်သို့မဟုတ်အကျဉ်းစကားပြောဆိုကြည့်ရှုရန်အရပ်နှင့်အတူမရွှေ့ဘူး။ နှင့်၊နှင့်၏။ အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကံကောင်းပါစေ။ ကြှနျုပျတို့အကွောငျးနှင့်အစကားပြောဆိုချက်။ အမှန်မှာအတွက်ပြည်တွင်းရေးကိုအပည္နယ္၏မိန်းကလေးများကြောင်းရရန်ခက်ခဲသည်ကျွမ်းနှင့်အတူလူတ။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုတူညီတဲ့ခံစားချက်ကိုကာကွယ်တားဆီးရတဲ့အထဲကသင်သိရန်အသီးအသီးအခြား။ ကြည့်ကြရအောင်အလေးအဓိကအသောသူများ-စက်ဆုပ်ရွံရှာ၊မထီ၊ကြောက်ရွံ့၊နှင့်ဝမ်းနည်းမှု။ အဆိုပါမိန်းကလေးမှာရူလူ၊နှင့်ဦးခေါင်း ။ သူမမသိသေး၊ဒါပေမယ့်သူမကယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းဒီလူဖြစ်နိုင်တစ်ဦးအရက်သမား၊နှင့်ဤညံ့ဖျင်းဝတ်ဆင်ယောက်ျားသည်အလှူအကြောင်း၊အားလုံးရဲ့။ နှင့်၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ဤခံစားမှု၏ကြိုက်အကြတယ်ပေါ်အမျိုးသမီး၏မျက်နှာကိုလူသာမမြင်၊ဒါပေမယ့်လည်း၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အကြောင်းသိတယ်၏ရန်လိုသဘောထားဆီသို့ဦးတည်။ ထွက်အများအပြားရှိပြီးသား ငါအလေ့အကျင့်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ထိန်းချုပ်ထဲက။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်အောင်မြင်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-လုံလောက်သောအမျိုးသမီး။ မျက်နှာပေါ်မှာ၊ဒီများသောအားဖြင့်အဖြစ်အလိုလိုကျင့်တစ်ခုကုန္သြယ္ဖက္နိုင္ငံမ်ားရဲ့အပြုံးသို့မဟုတ်မျက်နှာအမူအရာ။သင်သိသည့်အတိုင်း၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကူအညီဒါေပမဲ့သတိထားမိမွာပါ။. ဒါဟာလျော့နည်းစေပေနှင့်၎င်း၏အရေးပါကြောင့်စေမည်အတွက်တူညီသောအနေအထား။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမလိုဆောင်သွားစေလိုကြောင်း။ နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အထိတစ်ဦးယောက်ျားနဲ့ထည့်သွင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်ရှေ့နေ၊ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောကြောက်ဆရာဝန်ပဲပျင်းစရာနှင့်နှောင့်အယှက်။ အမျိုးသမီး၊ဤအလိုလိုကျင့်ခြင်း၏ပုံစံအတွက်အသံအတွက်ဦးခေါင်းကေျပာသည္သြားအတူ၊ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူရှိလိမ့်မည်ကဲ့သို့သင်တို့အချိန်၊မမျှော်လင့်သောအဖြစ်ကောင်း၊ပေး၊စသည်တို့ကို။မှ၎င်း၏ပိုင်ရှင်၊အမျိုးသမီးနှင့်အတူဝမ်းနည်းဖွယ်စကားရပ်တွင်သူမ၏မျက်နှာ၊မျက်စိလျှော့ချ၊နှင့်အပဲ့။ လူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေး၏အမျိုးမျိုးရှိသမျှမျိုးကိုအကြောင်းပြသပြီမဟုတ်သေးကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်အတိတ်ဆက်ဆံရေး၊သူမ၏ဦးခေါင်း၌အိမ်မှာအတွေး:မကောင်းတဲ့ဘာမှမဖြစ်ပျက်ဒီလိုရှိပါတယ်၊ကအဟောင်း၊အခြားအယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၏၊ဖြစ်ကြောင်း၊ပြီးမှလမ်းလျှောက်ဟန်၏အခြားမှအလေ့အကျင့်၊နှင့်မှ အရူး။ တကယ်တော့၊ဤသူအပေါင်းတို့စိတ်ခံစားမှုအထွန်း၏အတွင်းအထီးကျန်ပြီးကြောက်မျိုးသမီးတစ်ဦး၏၊သူတို့ကအစောင့်ရှောက်အတွက်သူမ၏မျိုးသန့်ဇုန်။ ရတဲ့အထဲကကခက်ခဲဖြစ်တယ်၊ဒါပေမဲ့အတော်လေးလက်တွေ့ကျကျ။ စတင်သူများအတွက်၊သင်ရှိသည်သည့်အခါမကောင်းတဲ့အကြံအစည်အကြောင်းမသိလူများသေးသောအဆင်သင့်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အကြောင်းတာ့ေနှင့်ရွံ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ၊နှင့်အတူဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ နှင့်နှေးကွေးဆင်း။ နားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်သောဤမှားယွင်းတဲ့တရားစီရင်သောကြောင့်၊သူတို့အတည်ပြုပြောဆိုသည်မဟုတ်။ သင်တို့ကိုမသိရပါဘူး။ ဒီစမ်းသပ်မှုတစ်ခု၊အဆိုအရာအစည်းအဝေး၊အဘယ်မှာသင်သူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုပြီးလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်အဘယ်သူသည်သွင်းယူကြား ၄ နှင့် ၆၏၁၀-ချက်ဆွဲဆောင်မှု။ သေချာအောင်သူတို့ထဲကအများအပြားမဟုတ်အဖြစ်ဆိုးအဖြစ်စဉ်းစား။ ဟုတ်ကဲ့၊ဤအတွေ့အကြုံကူညီပေးပါမည်သင်ယူသိမှရရန်အသီးအသီးအခြားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ၊မလိုမုန်းထားခြင်းမရှိဘဲနှင့်ဖြစ်စေသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်ပြီးနောက်ဆက်သွယ်ရေး၊ဒါပေမယ့်မမီ။ အဓိကအုပ်ချုပ်ရေး၏ဤအတွေ့အကြုံစဉ်အတွင်းအစည်းအဝေးသည်မအောင်ရေရှည်အစီအစဉ်များအတွက်အမျိုးသားများအတွက်၊သို့သော်ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်း။ အချိန်များအတွက်ပျော်စရာ။ နှင့်အောက်မေ့သတိရသောအမျိုးသားများကဲ့သို့အမျိုးသမီးသူ၏ငြိမ်ဝပ်နှင့်အကျိုးစီးပွား၊နှင့်ထွက်၏ဝမ်းနည်းမှု၊ပြီးအများကြီးအတွင်းတယ္။.
သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်၏စာမျက်နှာတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်ရက်စွဲများအတွက်လိဇ်မြို့ဘေလီဇ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသိုင်းဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ သင်တွေ့ဆုံရန်ချင်လူငယ်တစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်လီဇ်စီးတီးနှင့်အခမဲ့ထိုသို့ပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာများ၊ဥပဒေကြမ်းများနှင့်ကန့်သတ်။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိလူအချင်းချင်းတွေ့ဆုံရသို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ဆိုက်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်ရက်စွဲများအတွက်လိဇ်မြို့ဘေလီဇ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသိုင်းဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။.
ယခု၊ထိုအင်တာနက်လည်းအသစ်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့လိင်ဗီဒီယိုချက်တင်။ အ နိုင်ငံများ၊လူမျိုးနှင့်မ-ရိုးရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတော်လေးလွဲ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအပြုသဘောလှုပ်ရှားမှု၊ဒါပေမယ့်ဒီပြဿနာဖြစ်နေဆဲပြဿနာတစ်ခုခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ ေလိင်တူလူများအတွက်ရုရှား၊ဘီလာရုစ်၊ယူကရိန်း၊ကာဇက်စတန်နှင့်အခြား နိုင်ငံများ၊ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အာရုံစိုက်လုပ်ဖို့အဘယ်မှာဆက်ဆံရေးအတွက်တည်ရှိလွန်နည်းပါးကလပ်အသင်းနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများအတွက်သင့်လျော်မ-စံနစ္ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏၊နှင့်အများအားဖြင့်မြေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ချက်တင်ကစားတဲ့လုံးဝအမည်မသိနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်များအတွက်ဝင်။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောငါတို့၏ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အပေါင်းတို့တိုက်မှကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများ၊နှင့်သောမြို့အရပ်သင့်တယ်မသာအတွက်လိင်၏ဦးစားပေး။ နှင့် အဘယ်ကြောင့်စစ်ဆေးဒီနေရာကိုနိုင်ငံတကာ။ ထို့အပြင်၊အများအပြားအနောက်နိုင်ငံများရှိမိတ်ဆွေနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ကို၊လြယ္ကူစြာရွာေဖြတဲ့အနေအထားဖြစ်စေညွှန်ပြပိုမိုဆွဲဆောင်မှု။ ဒါကြောင့်၊ရဲ့အခမဲ့လိင်ချက်တင်သွားကြသည်ဟုတ်ကဲ့၊သင်တရားစွဲဆိုမည်မဟုတ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးသုံးပြီးကြိုးစားကြည့်ပါ။ သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်စေ။ နေစဉ်သင်ချက်ချင်းစတင်ရန်နူးစာမျက်နှာမှအသွားအ စာမျက်နှာ၊၎င်း၏အသုံးပြုမှု၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့မိုက်ကခွင့်မပြု၊ထိုအခါမူကားသင်မြင်သောအရောင်းမြင့်၊အရောင်းဗျူဟာဖို့ဆုံးဖြတ်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောပြဖို့လူတွေပို၊အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်တိတ်ဆိတ်စွာ၏။ အားလုံးအခြားကမ်းလှမ်းမှုမှရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအမိန့်၊အလိုအလျှောက်နှင့်ကျပန်းဆန့်ကျင်သောအသုံးပြုသူဆက်သွယ်။ အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှ၊ကုမ္ပဏီအမည်အတွက်အနိမ့်-လက်ဝဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး၏ကိုယ်စားလှယ်မ်က္ႏွာကိုရွေးပါ။ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံအားလုံး။ လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု ။၊ ကိုနှိပ်ပါ"ဆက်"နှင့်သင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်အခြားအသုံးပြုသူ။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊နည်းပညာရှုထောင့်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး။ ဒါဟာသုံးပါရန်မည်သို့ကောင်းစွာအခမဲ့လိင်ဗီဒီယိုချက်တင်ဆက်သွယ်ရေးလိမ့်မည်ပိုပြီးအထူးသဖြင့်လိင်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်၊ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမကအထူးခလုတ်ကိုအပေါ်နှိပ်ခြင်းလိုုင္းအပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးအစားကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း။ မင်တကာ၊သည်၊အဘယ်သူမျှမပါက္လွ၊ကဲ့၊ခလုတ်အကြောင်းပေါ်ကလစ်နှိပ်၊စသည်တို့ကို။ လမ်းဖြင့်၊အတူတူသွားအတွက်အားလုံးနီးပါးအခမဲ့လိင်ဗီဒီယိုချက်တင်န်ဆောင်မှုများ။ ဤကိစၥအညီနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အမြဲတမ်းစိုးမိုးရေးအတွက်အထိမ်းအမှတ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုတားမြစ်အဘို့အချိန်ရဲ့တယောကာလ။ ရုရှားချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်အသက်ရှင်သောချက်တင်ကစားတဲ့အလွယ်အားဖြင့်ရွေးချယ်ဖို့ကျား၊လုံးဝကိုအခမဲ့။ နိကင္မရာ၊အပြည့်အဝခံစားအတုဆက်သွယ်ရေး၏။ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈၊ရာကနေတွေ့ဆုံမည်မှရဲစွမ်းသတ္တိ သင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်အလင်းအလျင်နှင့်အဆုံးမဲ့လေထုထဲတွင်တစ်ပင်လယ်၏အသိအကျွမ်းသောမနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးများ၊ခံစားချက်နှင့်တွေ့ကြုံ။.
တစ်ကြိမ်မှာဆက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်၊နိုင်ငံအတွက်အမိမြေမိမိ၏ဘိုးဘေးကြောင့်၊သူသည်နောက်တဖန်မအသိရဲ့အဓိပ္ပာယ်အသက်တာ၌ထိုမြို့တို့တွင်ကွန်ကရစ်နှင့်စျေးဝယ်စင်တာ။ အဲဒီနီးကပ်လွန်း။ ကျေးဇူးပဲအိုကေ၊နှင့်အတူဇာတ်ကောင်နှင့်အယူအဆ။ ရှိအိမ်တအိမ်နှင့်အတူအားလုံးအထစ်အငေါ့တူ၊တစ်မြို့တိုက်ခန်းများ၊နှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူတောရိုင်းကြီးများ၏မြေကြီးမားသောဥယျာဉ်။ အမျိုးသားများနှင့်အတူအ ။ ဒီနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အရည်အမျိုးသားရှိသမျှကျော်ကနေအခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးဆိုက်ပေါ်တွင်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အမျိုးသားနှင့်ယောက်ျားလေးများအနေဖြင့်အဆိုပါဒေသ၏နေအိမ်၊အရာသည်သာအ တိုင်းဒေသကြီး၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့်တိုင်းဒေသကြီး။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်း၊မေတ္တာကိုရှာတွေ့၊အသစ်အသိအကျွမ်း၊သူငယ်ချင်းများပါစေ၊ထိုအခါ၏ဒုတိယတစ်ဝက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။
စတင်ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်လျှို့ဝှက်ချက်အတွက်ကြိုတင်ပြီး။ ဒါကြောင့်မည်သည့်အရပ်၊အပေါင်း-အခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်ပါသည်စိမ်းတစ်ယောက်အတွက်အတွေ့ကြောင့်မတော်တဆ။ အားလုံးပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုကျန်ကြွင်းစေပြီသောစကားသို့မဟုတ်စာပေးစာကလုံးဝဖျက်မှဆာဗာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မရှိတော့သူတို့ကိုဖတ်ရှုဖို့။ အသီးအသီးမှတ်သားနိုင်ပါတယ်အစအဦး၏တစ်ဦးစကားပြောဆိုကြောင်းဆက်လက်လိမ့်မည်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာကိုသင်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကထိန်းသိမ်းထား-ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလအနည်းငယ်။
တွေ့ဆုံရန်အမျိုးသားများအတွက်၊မိန်းကလေးများအတွက်အကိုုအင်တာနက်ကနေတဆင့်၊အဖြစ်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အချိန်အကြာကြီး သူတို့လာကျွန်ုပ်တို့ဘဝအသက်တာသို့။ သငျသညျကွားနိုငျအကြီး၏ဇာတ်လမ်း၊အဖြစ်မိတ်ဆက်စကားမှတဆင့်အင်တာနက်ကိုကူညီရှာဖွေဖို့တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အနာဂတ်အတွက်ဖန်တီးရန်တစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစု၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းစုေပါင္း ၅၈ အခါ၊ထောင်ကြာထက်လျော့နည်း။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍကကစားသေချာအတွက်အလိုက်ဖက်၏။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ပဋိပက္ခစာသင်ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အမှန်တကယ်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်အား၊နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးမည်ဟူသောဖွဲ့စည်းအများဆုံးအဆင်သင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာလိုက်ဖက်ဂိုးသွင်းများအတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသင်နှင့်နေရာချထား၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်ကိုုအသစ်တစ်ခုအဆင့်၊နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်များမှာ။ ခက်တွေ့ဖို့တစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ပျော်ရွှင်စေမယ်လို့။ ၏သင်တန်း၊သင်ပြောနိုင်ဘာမှမနှင့်အရာအားလုံးကို၊အထူးသဖြင့်လျှင်၊လူအသင်မေးသင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်အတူအံ့အားသင့်ပုံမှန်။ ဒါေပမယ့္မင့္ကေ။။။ သင်စရာမလိုပါလျှင်ရဟန်းသည်သို့မဟုတ်တစ်ရသေ့၊အထီးကျန်တင်ရမယ်။ ကိုတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး၏အထီးကျန်အတွက်ခေတ်မီလူနေမှုအခြေအနေဖြစ်ပါသည်ထက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသင်အတိတ်အတွက်၊သို့သော်၊အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေ၊ငါတို့မိဘတွေ၊မခံမရပ်၏ရှေ့တွင်တီဗီေမာ္နီတာမ်က္ႏွာျတနေ့လုံး။ သူတို့ပါတီအစည်းအဝေး၊ခရီးမှထိုအရပ်မှ။ နည်းလမ်းများစွာရှာတွေ့မှတစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ လက်ရှိမျိုးဆက်အတွက်ဒီသဘောဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ နေထိုင်သူအများစုကမြင့်အဆောက်အအုံနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်နီးချင်းမမြင်ဖူးသေးဘူးတဲ့။ ရှိမယ့်ဘယ်နေရာကိုမှသွား၊ဒါပေမယ့်ညာဘက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်သင်ဖို့၊ပြောဖို့သွား။ သူစိတ်ဝင်စားမှာအဆိုပါကုမ္ပဏီသည်။ အခါအဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးမားပြီးစင်ကြယ်၏၊ဒါကြောင့်လည်းအလွန်ခက်ခဲရှာဖို့တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအင်တာနက်ကို။ ဒါဟာရဲ့အစွမ်းထက်နှင့်ကြီးတွေ၊အသိတွေအများကြီးလျှင်မအရာအားလုံးကို။ နီးပါးအတွက်မိနစ်အနည်းငယ်၊သငျသညျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်၌သင်တို့အဘို့အတုံ။ မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်း၊သင်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်တစ်ခုအဖြစ်အသစ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ပေါ်သည်ထင်ရှားမှာအဆိုပါကောင်တာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ ၏အရေအတွက်ကိုစံမ်ား။ တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းသူတို့လိုချင်တဲ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊တစ်စုံတစ်ဦးကရှိပန်းတိုင်များ-အိမ်ထောင်နှင့်သားသမီး၊တစ်စုံတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါအလိုတူလူဘုံအကျိုးစီးပွား၊ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုသည်ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အဖျြောဖွရေး။ ပြားပံုစံမ်ားတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြဘယ်သို့သောအသုံးပြုသူအတွေ့အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒီနေရာမှာတှေ့နိုငျသောသူလူကိုက်ညီသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်၊ပုံသဏ္ဌာန်၊မျက်နှာအသွင်သဏ္ဌာန်၊ဆံပင်အရောင်၊ခန္ဓာကိုယ်အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အခြား။ သင်ဖတ်ပြီးပါပြီအများအပြားပံုစံမ်ား၊ဖော်ထုတ်အခြားမည်သူမဆိုထက်ပိုပြီး၊တစ်ခုစတင်နိုင်ပါသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အကြိုက်တဲ့အျနှုတ်ခွန်းဆက်။ ဒါကြောင့်၊ပိုပြီးနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ခင်လာမည့်အစည်းအဝေး။ အခြားသူများအားဖြင့်သွားချိန်းသည်နက်ဖြန်နေ့၌။ တစ်ယောက်မဖြစ်မနေပြောင်းလဲဖို့အလယ်အလတ်ပည္နယ္ချက်စာပေးစာအတွက်အမှန်တကယ်စည်းအဝေး-သင်ဖုန်းကိုစကားလက်ဆုံ။ ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ က၏အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေနေသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်၊အကူအညီဖြင့်များ၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု။ နေရာတိုင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်သာတုံပါဝင်၊အများအပြားလိမ်လည်။ ဒါဟာမှန်ပါတယ်ကြောင်းပြောဖို့ဒီနေရာမှာ၊ ပိုထက်အခြားဆိုက်များပေါ်တွင်။ ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုစတင်ရန်ဤစိတ်ကူး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်ရနိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်သွယ်တဲ့လူ။ အခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ဖို့အချစ်တဦးတည်း။ ဒီတစ်ခါလည်းသူမည်မဟုတ်တစ်ကျွန်းစုနှင့်အထောက်အပံ့များအတွက်သင်၌အရာရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကောင်းတစ်ဦးအဆွေခင်ပွန်း။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမကြာခဏဖြစ်ပျက်။ ဟုတ်ကဲ့။ အများစုကအမျိုးသားနှင့်မိန်းကလေးများကိုတွေ့ကြပြီအချစ်မှာ။ သူတို့အတူတကွနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ဂရုစိုက်ပညာေရးမိမိတို့၏ကလေးများ။ ဘာမှမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မကြာခဏရှာတွေ့မှတစ်ဦးကိုခစျြတစျခု၊သင်လိုအပ်အချိန်အများကြီးဖြုန်း။ ဒါကြောင့်မပါဘဲမပြည့်စုံအတွေ့အကြုံနှင့်ကျရှုံး။ ဒါပေမယ့်သင်ရှာလိုလျှင်၊သင်ချက်ချင်းပဲသိကြပါလိမ့်မယ်ကြောင့်အမကြီးအားလုံးအချည်းနှီး။ ကလွဲရင်ဒီအခုတော့လုံးဝအမှန်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအခမဲ့။
တွေ့ဆုံရန်အမျိုးသားများအတွက်၊မိန်းကလေးများအတွက်ပိုက္အင်တာနက်ကနေတဆင့်၊အဖြစ်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများ၏စက်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်းရှည်လျားအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သငျသညျကွားနိုငျအများကြီးဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအကြောင်းနိဒါန်းအင်တာနက်ကနေတဆင့်သင်ကူညီပေးရှာတစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းစုေပါင္း ၅၈ အခါ၊ထောင်ကြာထက်လျော့နည်း။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍကကစားသေချာအတွက်အလိုက်ဖက်၏။ ပိုက္စာချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ရှာဖွေစာန်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အယူအများဆုံးအဆင်သင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာလိုက်ဖက်ဂိုးသွင်းများအတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသင်နှင့်နေရာချထား၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်လက်ဖက်ရည်ကိုတစ်ဆင့်သစ်၊နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်များမှာ။ ခက်တွေ့ဖို့တစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ ၏သင်တန်း၊သင်ပြောနိုင်ဘာမှမနှင့်အရာအားလုံးကို၊အထူးသဖြင့်လျှင်၊လူအသင်မေးသင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်အတူအံ့အားသင့်ပုံမှန်။ ဒါေပမယ့္မင့္ကေ။။။ သင်စရာမလိုပါလျှင်ရဟန်းသည်သို့မဟုတ်တစ်ရသေ့၊အထီးကျန်တင်ရမယ်။ ကိုတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး၏အထီးကျန်အတွက်ခေတ်မီလူနေမှုအခြေအနေဖြစ်ပါသည်ထက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသင်အတိတ်အတွက်၊သို့သော်၊အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေ၊ငါတို့မိဘတွေ၊မခံမရပ်၏ရှေ့တွင်တီဗီေမာ္နီတာမ်က္ႏွာျတနေ့လုံး။ သူတို့ပါတီအစည်းအဝေး၊ခရီးမှထိုအရပ်မှ။ နည်းလမ်းများစွာရှာတွေ့မှတစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊မျိုးဆက်အတွက်ဒီသဘောဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ နေထိုင်သူအများစုကမြင့်အဆောက်အအုံနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်နီးချင်းမမြင်ဖူးသေးဘူးတဲ့။ ရှိမယ့်ဘယ်နေရာကိုမှသွား၊ဒါပေမယ့်ညာဘက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်သင်ဖို့၊ပြောဖို့သွား။ သူစိတ်ဝင်စားမှာအဆိုပါကုမ္ပဏီသည်။ အခါအဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးမားပြီးစင်ကြယ်သည့်မင့်၊ဒါကြောင့်အလွန်လွယ်ကူရှာဖို့တစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအင်တာနက်ကို။ သူအစွမ်းထက်သည်နှင့်ကြီးတွေ၊အသိတွေအများကြီးလျှင်မအရာအားလုံးကို။ ပါး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အခမဲ့ပိုက္ချိန်းတွေ့ဆိုက်သင်တို့အဘို့။ မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်း၊သင်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်တစ်ခုအဖြစ်အသစ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ပေါ်သည်ထင်ရှားမှာအဆိုပါကောင်တာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့အရေအလိုက္သက္ေ။ တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းသူတို့လိုချင်တဲ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊တစ်စုံတစ်ဦးကရှိပန်းတိုင်များ-အိမ်ထောင်နှင့်သားသမီး၊တစ်စုံတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါအလိုတူလူဘုံအကျိုးစီးပွား၊ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုသည်ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အဖျြောဖွရေး။ ပြားပံုစံမ်ားတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြဘယ်သို့သောအသုံးပြုသူအတွေ့အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒီနေရာမှာတှေ့နိုငျသောသူလူကိုက်ညီသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်၊ပုံသဏ္ဌာန်၊မျက်နှာအသွင်သဏ္ဌာန်၊ဆံပင်အရောင်၊ခန္ဓာကိုယ်အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အခြား။ သင်ဖတ်ပြီးပါပြီအများအပြားပံုစံမ်ား၊ဖော်ထုတ်သူတို့မကြိုက်၊နှင့်တစ်ခုစတင်နိုင်ပါသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အကြိုက်တဲ့အျနှုတ်ခွန်းဆက်။ ဒါကြောင့်၊ပိုပြီးနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ခင်လာမည့်အစည်းအဝေး။ အခြားသူများအားဖြင့်သွားချိန်းသည်နက်ဖြန်နေ့၌။ တစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်သွားရန်ပြည်နယ်အလတ်အချက်ပေးမီ၊တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အစည်းအဝေး-သင်ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းဖြင့်။ အဲသည်လိုအပ်ချက်အဘယ်သူမျှမ က၏အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်သုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု။ နေရာတိုင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်သာပိုက္၊အထူးသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်လိမ်။ ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမှန်ဆိုဒီထက်ပိုအခြားဆိုက်များပေါ်တွင်။ ဒါပေမယ့်မအကြောင်းရင်းကိုစတင်ရန်ဤစိတ်ကူး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်ရနိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်သွယ်တဲ့လူ။ အခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ဖို့အချစ်တဦးတည်း။ ဒီတစ်ခါလည်းသူမည်မဟုတ်တစ်ကျွန်းစုနှင့်အထောက်အပံ့များအတွက်သင်၌အရာရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကောင်းတစ်ဦးအဆွေခင်ပွန်း။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမကြာခဏဖြစ်ပျက်။ ဟုတ်ကဲ့။ အများစုကအမျိုးသားနှင့်မိန်းကလေးများကိုတွေ့ကြပြီအချစ်မှာ။ သူတို့အတူတကွနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ဂရုစိုက်ပညာေရးမိမိတို့၏ကလေးများ။ ဘာမှမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မကြာခဏရှာတွေ့မှတစ်ဦးကိုခစျြတစျခု၊သင်လိုအပ်အချိန်အများကြီးဖြုန်း။ ဒါကြောင့်မပါဘဲမပြည့်စုံအတွေ့အကြုံနှင့်ကျရှုံး။ ဒါပေမယ့်သင်ရှာလိုလျှင်၊သင်ချက်ချင်းပဲသိကြပါလိမ့်မယ်ကြောင့်အမကြီးအားလုံးအချည်းနှီး။ကလွဲရင်ဒီအခုတော့လုံးဝအမှန်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအခမဲ့။.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသံဆွေးနွေးလိုအပ်မှသာတစ်ကမ်သို့မဟုတ်စာသား-မှ-စကားကိုအစည်းအဝေး။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့၊အကြားဆက်သွယ်ရေးအပေါ်လူအဝက်ဘ်ခဲ့ပြင်ပနိုင်ငံ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာသားမက်ဆေ့။ ဤကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံရန်ဖို့လူကနေတဆင့်ဗီဒီယိုချက်တင်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်အသုံးပြုစကားပြောဆိုချက်၊ခွင့်ပြုရန်အသုံးပြုသူများအသုံးပြုဘျသာစကားကိုနားထောငျဖို့၊ဒါပေမယ့်လည်းကြည့်ဖို့အသီးအသီးအခြား။ ဤဝန်ဆောင်မှုများဟုခေါ်ကြသည်နှင့်ကစားတဲ့စကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရိုးချက်တင်နှင့်က။ သူတို့၏အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိလူကြိုက်များနှင့်ပါဝင်မှုများ၏မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများနောက်ဖန်ဆင်းခြင်း၏။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ကစားတဲ့စကားပြောသည့်အတွက်သင့် ကျပန်းရွေးချယ်ထားကနေသုံးစွဲသူအရေအတွက်ပစ္စုပ္ပန်။ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ၊ဒီချက်တင်အားဖြင့် ကစားတဲ့ခဲ့ဆွဲဆောင်ရန်ထက်တစ်သန်းကိုဧည့်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်၊အများအပြားရှိပါတယ် ကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အပေါ်။ အထူးသဖြင့်သင်တို့အဘို့အ၊ကျနော်တို့ကောက်ယူပါပြီအကောင်းဆုံးအဗီဒီယို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအဆက်မပြတ်ရေးသားနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူဗီဒီယိုချက်တင်။ ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပင်မရှိဘဲတစ်ဦးကမ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ကျနော်တို့ရှိသည်တစ်ဦးကိုအထူးအပိုင်းနှင့်အတူအသံနှင့်စာသား။ အားလုံးစကားပြောဆိုချက်ဆြးေႏြးလုံးဝအခမဲ့နှင့်လိုအပ်ပါဘူး။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူ၊အထူးသဖြင့်သင်တို့အဘို့ပြင်ဆင်ကြပြီတစ်ဆိုဒ်အောက်ခြအေပိုင်း-ချက်တင်။ သင်ပြုလိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်ရွေးဗီဒီယိုချက်တင်ကနေစာရင်း၊တစ်ဦးကမ်မိုက်၊စကားေျ။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်တစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ ဒီမှာအဲဒီရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နှင့်အခြားဗီဒီယိုမဳပ္ေ။ ဤချက်တင်လးလူကြိုက်များနှင့်အတူအသုံးပြုသူရှိပါတယ်၊သို့သော်အသစ်ချက်တင်အပေါ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ရုံစိုက်ပျိုးဖို့စတင်။ အတွက်၊သင်သွားနိုင်သည့်အပေါ်တစ်ဦးနိဒါန်းခရီးမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ။ သင်စရာမလိုရိုက်ထည့်ရန်မည်သည့်အချက်ဆိုက်၊မလိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ဗီဒီယိုစကားပြောလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည် တာဝန်ခံအခမဲ့။
လူကြိုက်အများဆုံးမထားကစားတဲ့ကြောင်အတွက်ရုရှား။ တက်ရောက်သူ-ငါးရာထောင်သောလူတစ်နေ့မှ နိုင်ငံများနှင့်ရုရှား။ ကမ်းလှမ်းချက်များတစ်အရေအတွက်၏အားသာချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်အတွက်ခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ကခြွင်းချက်အဘို့နိုင်ငံများနှင့်အတူရုရှား။ ဒီမှာ၏အကျိုးကျေးဇူးများများမှာ:ဆက်သွယ်ရေးတင်အတွက် ၂ စက္ကန့်။ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါနှင့်သမ်ချက်ချင်းစတင်ရှာဖွေနေများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ အဓိကအားသာချက်၊ငါသတိပြုမိသည်ဤအခမဲ့ချက်တင်။ ဒုတိယကြီးမားတဲ့အားသာချက်ကမလိုအပ်ပါဘူး။ လျှို့ဝှက်မင့်ရှိကြောင်းထက်မပို ၁၀ ကောင်းသောယောက်ျားတွေနှင့်လွတ်မြောက်မိန်းကလေးများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ဘယ်သူကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်အပေါ်လမ္း၊ကဖေးအတွက်နှင့်အခြားအများပြည်သူနေရာများ။ ဒါပေမယ့်ရဲ့ခြင်္သေ့သည်ရဲ့ရှယ်ယာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ကွဲပြားခြားနားသော။ ကောင်လေးများ၏ကြောက်လန့်ပျက်ကွက်၊မိန်းကလေးများအဖြစ်ချင်ပါဘူးအပေါ်ချမှတ်၊တတိယရိုးရှင်းစွာလုံလောက်တဲ့အချိန်မရှိပါ။ အဘယ်မှာရှိကြောင်းဖွင့်အကူအညီမှကြွလာ: ဗီဒီယိုချက်တင်။ ဘာမှမကြောက်ဖို့၊တကယ်ပါပဲ၊သင်အသုံးပြုသူရဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်၊ထိုသို့ဆိုလိုတယ်သူတို့ပြီးသားအဆင်သင့်။ လူတိုင်းပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်၊တူဒါဟာမင့်ပြီးဝါးနှက်သူတို့အမှန်တကယ်သူတို့ရှာနေမှာသုည။ နှင့်မည်သို့ဤအမှု၌ထားခဲ့ဖို့မသကဲ့သို့၊။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။ အဲဒီမှာပြောဖို့အသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦး။ အဖြစ်မကြာမီအဖြစ်အင်တာနက်ပေါ်သည်ထင်ရှား၊လူချက်ချင်းစတင်အသိအမှတ်ပြုရန်။ အစဦးတွင်၊စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုချက်တင်ဖန်တီးခဲ့၊ဒါပေမယ့်အများကြီးရှိပါတယ်လိမ်လည်သူထားပုံ၏အပေါ်တခြားရုပ်ပုံ၊သို့မဟုတ်၊သငျသညျပြန်ပြောသည်။ စကားလက်ဆုံဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်နှေးကွေးရှာတွေ့သည့်တိုင်အောင်သင်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူ။ ဗီဒီယိုစကားပြောဖြေရှင်းနိုင်ဒီပြဿနာတွေကိုချက်ချင်း။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောသည်ချက်ချင်းမြင်နိုင်နှင့်ကျမ်းမှသူအပြောနေတာဖြစ်ကြောင်း။ ဒီအများကြီးပိုပြီးအဆင်ပြေသည်။ တိုင်းအတွက်ဘဝအချိန်လေးတွေလည်းရှိတယ်သောအခါအထီးကျန်။ တခါတရံတွင်သင်သည်ဆွေးနွေးချင်အရင်းနှီး၊ဒါပေမယ့်လက်ျာလူတစ်ဦးပါဘူး။ အတွက်စကားပြောခြင်း၊သင်မည်သူတစ်ဦးကိုတွေ့လိမ့်မည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ဒါဟာအမည်မသိ။ ငါသည်သင်တို့၏အကောင်းဆုံးအဘို့အသင့်ရှာဖွေနားထောင်တတ်သူ၊မိတ်ဆွေ၊ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သို့မဟုတ်။ ကစားတဲ့စကားပြောနှင့်အတူမိန်းကလေးများနဲ့အသွင်လိင်နှင့်အတူနှောင့်ရှက်မည်မဟုတ်မည်သူမဆိုနှင့်။။။။။
ခေတ်အလယ်ပိုင်းတွင်၊လူအသက်ကိုခဲ့ အမှန်တကယ်ရုန်းကန်ရှင်သန်ရပ်တည်ကြားသွေးထွက်သံယိုတိုက်ပွဲ၏သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြည့်စုံမရှိခြင်း၏။ ထိုအချိန်မှာ၊ကလူလည်းအသေအစောပိုင်းတွင်စတင်တဲ့မိသားစုအဖြစ်မကြာမီသူတို့ရောက်ရှိသေးပါ။ လောလောဆယ်၊ဖြတ်သန်း၏နိမိတ်လက္ခဏာအောက်တွင်ထူးခြားသောနည်းပညာပိုင်း၊ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆေးဝါးတိုးတက်မှုသောလျှောက်ထားအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာ။ လူများစွာနှစ်သက်အားရပထမဦးဆုံးဖွင့်၊တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်နေအိမ်နှင့်သာထို့နောက်အဘို့အကြည့်အဖော်များအတွက်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကြိုဆိုလေထုပျော်မွေ့ရန်အဆင်း၏အသက်တာနှင့်အတူတစ်ဦးကိုခစျြတစျခု။ သူတစ်ဦးမဟုတ်ပဲလိုက်ရှာသည်မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏စံနမူနာ၊လိုစွန့်ပစ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အချိန်အပေါ်ကြဘူးသောသူတို့မကိုက်ညီသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏အကောင်းဆုံး။ ထို့ကြောင့်အနှစ်လွန်သွား။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်ဖွံ့ဖြိုးသော်လည်း၊သူ၏အသက်တာနေဆဲဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရည်းစားအားလုံးတက်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအချိန်၊နှင့်အလုပ်ဖော်အတူတူလုပ်ဖို့။ ပင်ယခင်အတန်းဖော်ပို့စ်သူတို့ကိုလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သင်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပျော်ရွှင်သောမိသားစုဘဝ။ အဘယ်သို့ပြုရမည်။ ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အကူအညီအရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈၊ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစံပြနေရာဖြည့်ဆည်းနိုင်သူတွေမဟုတ်ပဲကြည့်၊ဒါပေမယ့်ရှာဖွေဖို့ကြိုးပမ်း။ သတိရရှိကြောင်းလူအတော်များများမှာတယောအသက်အရွယ်။ သွားဖို့ဒုတိယ၊စိတ်ပျက်နှင့်အတူယခင်အရွေးချယ်ခံရသူပါ။ ထို့ကြောင့်၊ဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူ ၁၈ အသက်အနှစ်အရွယ်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်တွေ့ဆုံရန်သာလွန်လူငယ္မ်ား၊ဒါပေမယ့်လည်းမင်းသမီးနှင့်အတူအစိုင်အခဲအသက်အတွေ့အကြုံ။ လိုအပ်ချက်အဘယ်သူမျှမကြောက်လန့်ဖြစ်။ အသက်အရွယ်အသီးအသီးကွာခြားသည်။ အရွယ်ရောက်ကစားတဲ့ကြောင်များ ၁၈ နှစ်နှင့်အဟောင်းတွေနေသောသူတို့ကိုမသို့ခွဲဇာတ်နှင့်အမျိုးအစားများ၏အမှန်တကယ်သဘောဧရိယာ၊အရာအတွင်းသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်အတွက်ကျပန်းနိုင်ရန်။ သင်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်နိုင်ငံ၏အဖော်အဆင္ေကနေ၊နှင့်ထူထောင်နိုင်ရှာသဖြင့်ကိစ္စသာလူများအတွက်၊သို့သော်ပို။ အားဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသောမှ ၁၈ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျား၊သင်သည်နှစ်ခုစလုံးတွင်မှဆက်ဆံရေးတွင်ဘာယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး၊လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်၊သောသူနှင့်မြင်းအပြည့်အဝတွင်ကဆုန်ရပ်တန့်၊နှင့်၌ကျလိမ့်မည်၊သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင်၏အသက်တာ၌သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း။ ယခုပင်အဟောင်းတွေလူတွန့်ဆုတ်ကြဘူးဆွဲယူဖို့အသီးအသီးအခြားနှင့်အသင်ပြောပြမည်မဟုတ်အင်တာနက်၊ချက်ပြုတ်နည်းများဖလှယ်၊ဟာသ၊ရေးသားရပြီးလက်ဆောင်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်နှောင့်ရှက်သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူပဲရပ်တန့်ချစ်စရာဖြစ်ခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏လူငယ်နှင့်တယ်ခိုင်ပေါ်တွင်သူတို့ခြေထဲမှာလူ၁၈ ပေါင်းကြောင်ကစားတဲ့၊မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်သင်တို့အဘို့အ။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်သင်၏ရွယ်တူနှင့်မိတ်ဆွေများကိုဟောပြောဖို့သင်ယူနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူဘယ်လိုလူတွေနေထိုင်၊အခြားနိုင်ငံများတွင်။ လျှောက်ထားဘို့အအခြားအရာတစ်ခုခု။ သတိပြုရကြမည်သောသူသည်သင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို:ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ။ ရုံမထင်ဘူးတူညီသောအရာအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်များ။ ထိုဆန့်ကျင်တွင်၊သူဧည့်သရုပ်ပြသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုပြောဆိုသောထိုးစစ်ကိုအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ဥပမာအားဖြင့်၊ညစ်ညမ်းသောအကြံပြုချက်များကိုကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနှင်သွား။ အရွယ်ရောက်ပြီးချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ကမ်းလှမ်းန့်စကားလက်ဆုံများအမျိုးမျိုးအပေါ်အကြောင်းအရာ။ ချက်အချိန် စစ်မှန်သော-အချိန်အစည်းအဝေးရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ပြည့်စုံသည်ခံစားချက်များကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှု။ ဤသည်ယခုအချိန်တွင်အခါလူနှစ်ဦးနိုင်ကလောင်အရောင်၏စိတ်အားထက်သန်သို့မဟုတ်နူးညံ့ရင်ခုန်စရာခံစားချက်များ၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာများ၊အလိုဆန္ဒကိုမြင်ရ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမိမိတို့ကိုးကွယ်မှုကိုအထပ်ထပ်။.
ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်များ၏ဆွဲဆောင်မှုယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများအား သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ ချိန်းတွေ့ယခုပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာပြီးလွယ်ကူရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများအတွက်ရှာဖွေအမှန်ခြစ်။ လက်လှမ်းဖို့အားလုံးဆိုက်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်ပွင့်လင်းနာရီဝန်းကျင်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ဒါကြောင့်လူတိုင်းအရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမှန်လူတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မ။ သင်မည်မဟုတ်ဘယ်လိုကြည့်လျင်အမြန်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးစတိုးတစ်ခုခုသို့အများကြီး။ တစ်ခုတည်းရှာတွေ့သောသူသည်လူများအသစ်မိတ်ဆွေများဒီနေရာမှာနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ဖန်တီးသောအခါဤစီမံကိန်း၊ကျွန်တော်တို့လေ့လာ၏အတွေ့အကြုံအခြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရွေးချယ်အကောင်းဆုံးအဖြေရှင်းနည်းများ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ၊အသီးအသီးအသုံးပြုသူခံစားရလွယ်ကူဆက်သွယ်ဖို့အခြားလူများနှင့်အတူ။ လက်တွေ့ကျတဲ့ရှာနှင့်ရွေးချယ်ရေးစနစ်သင်ကူညီလိမ့်မည်စတင်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲနှောင့်နှေး။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အပြည့်အဖွဲ့ဝင်၏၊ဖျောက်၏အထီးကျန်နှင့်အလုပ်အပြားမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အတွက်ကနေအခြား ၏၊ထို့နောက်သင်ရုံကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းအခုအချိန်မှာ။ အသီးအသီးအသုံးပြုသူသည်မေးသည်မှဝစွာထဲကရိုးရိုးနှင့်ရှင်းပုံစံ၊အများဆုံးသတင်းအချက်အသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်ပတ်သက်။ မမေ့မလြော့ပါထည့်ရန်ဓာတ်ပုံများကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနေျပာတဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတိုးပွါး၏အောင်မြင်မှုကိုအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်အားဖြင့်အကြိမ် ၂၀။ လူအပေါင်းတို့သည်အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်ရေးအတွက်၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်။ မှကျေးဇူးတင်စကား၎င်း၏ရိုးရှင်းသောမွတ္ထား၊အများပြည်သူသုံးအႏႈန္းကိုသာေလူငယ်များ၊ဒါပေမယ့်လည်းအဟောင်းတွေကလူ။.
သောသူတို့အဘို့အကြောင်းပြောဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှာတွေ့စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများသောသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းသိရှိပါတယ်အခြားအရင်းအမြစ်များအပြင်ရင်းနှီးသူများ၊ဆိုင်ချက်တင်။ လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ဖို့တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်၊ထို့နောက်သင်ချက်ချင်းထုတ်ပစ်တိုက်ရိုက်ကိုးကားမှလိင်ငှါမသကဲ့သို့မောင်းသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်။ ကြောင်းသတိရပါ၊အထူးသဖြင့်အဆင်းလှသောသူမြား၊ပူဇော်ထားရန်အစက်ကိရိယာသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့အိပ်ရာပေါ်မျက်နှာပြင်အတွင်းတစ်ရက်အနည်းငယ်အဘို့အအကြွေစေ့နှင့်မည်သည့်အရိပ်အမြွက်၏အများလိင်၊အနည်းဆုံးအစပိုင်းမှာဆက်သွယ်ရေး၏စေမည်၊တစ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှု။ ရှိလြှငျအများအတွက်လိုအပ်တဲ့ကလေးမလေးသည်တညဉ့်၊ထိုအခါရှိပါတယ်ပြုန်ဆောင်မှုများအတွက်ဒီအရာမလိုအပ်ပါဘူးထိမှန်ဖို့ချုံ၊တကယ်ပါပဲ၊ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးသူတို့အဘယ်ကြောင့်သိရှိ သူတို့ကသွားပါ။ မဆိုအမှု၌၊သင်လိုအပ်အဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အဘို့အရှာကြသည်အစည်းအဝေး၊နှင့်တည်ဆောက်သင့်ရဲ့အနာဂတ်မဟာဗျူဟာအနိုင်ရဖို့မိန်းကလေးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု။ င့်လျှင်သင်သည်အစဉ်အဆက်အားဖြင့်တစ်ဦးဗီဒီယို၊သင်မကြာခဏအချို့၏ညစ်ပတ် ၄၀ ပွင့်လင်းလေကော်ဖီတီ-ရှပ်အင်္ကျီ။ ဒါကြောင့်ပင်ပြပွဲ၊သဘောတူ။ နှင့်အတူရဲ့ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဖို့တစ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆေးကြောပြီးလျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နေ့လျှင်နှင့်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သည့်မတ်မတ်သွားဖို့အဆင်ပြေစတိုးဆိုင်။ ကိုသတိရပါသည်ဤပထမဦးဆုံးအစီရင်ခြင်းကိုခံရသဖြင့်သူ၏အဝတ်၊မီမိမိစိတ်၊ဒါကြောင့်သင့်လှလှပပဝတ်စားဆင်ယင်မဝတ်သင်တန်း၏၊နေ့တိုင်းပဲဖြစ်သဘောနှင့်သန့်ရှင်းမှုအတွက်လတ်ဆတ်သောလေထု။ ထိုအခါသင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအဆင့်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပင်ရ ၁ ချက်အောင်မြင်မှုအတွက်ဘက်တွင်စိတ်ဝင်စားဖို့အမျိုးသမီးအာရုံစိုက်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှဆက်စပ်အဆင်း၊ဒါပေမယ့်ပြီးသားနှင့်အတူအရပ်တွင်တည်ရှိသည်။ သင်စားဆင်ယင်တက်အတွက်အချုပ်အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအဝတ်အစားကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အေးဂျင့်၊ဒါပေမယ့်သင်ရှိပါကတောင်၏ညစ်ပတ်ဟင်းလျာများအတွက်အနစ်မြုပ်သင်နောက်ကွယ်မှသို့မဟုတ်မြင်နိုင်မီတာ၏အလွှာ၊ဒီအဖြစ်နိုင်သင့်ရဲ့အထင်ကြီးဖို့ ။ နေရာ အခမဲ့၊သန့်ရှင်းဖြစ်သင့်သည်၏အပျက်အစီးနှင့်အချည်းနှီးသောအသေးစိတ်အတွက်နောက်ခံအရောင်၊နှင့်အလင်းအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ငါ့ကိုယုံကြည်၊ထိုသို့ပါဘူးအားလုံးအသေးစိတ်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၊ဒါကြောင့်ကုသတာဝန်သိ။ ကောင်းပြီ၊မမေ့မလြော့ပါတဲ့မိန်းကလေးသင်မေးစေခြင်းငှါသင်၏အရာကြွင်းလေသင့်ရဲ့တိုက်ခန်းများပြင်ဆင်ဤအဘို့နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ရ။ ၃၆၀ အရည်အသွေးအတွက် ၂၀၂၀ အတွက်ဆင်းရဲသားကိုအရသာကိုသိရန်လိုအပ်။ သင်တန်း၏၊ကျနော်တို့အမေးမခံကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်တို့ကို ၄၊တစ်ကင်မရာနှင့်အတူ ၆၀၊ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးသုံးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာ။ လျှင်သင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါ၊သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အခြားအရာအားလုံးအရေးကြီးပါသည်ကြောင်းကိုသိလျှင်ထိုအစည်းအဝေး။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါကြောင်းအများစုကဆိုင်ချက်တင်ရှိနေသေးနှင့်အတူပြဿနာများ၏အရည်အသွေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၊နေဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်တူညီသောပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်တဆင့်ဆာဗာပိုမှုန်ဝါးဝါးနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်။ သို့သော်၊သင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုချက်တင်ရှိလိမ့်မည်၊အဘယ်သူမျှမအရည်အသွေးပြဿနာများ၊သိပ္ထားေဝန်ဆောင်မှုသမ်လွှင့်ဗီဒီယိုအတွက်အဆင်ပြေ၊ဒါကြောင့်နှင့်အတူပြဿနာများႈမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အပေါ်မျက်နှာပြင်လျှင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနစ်တကျအလုပ်လုပ်မ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ဤသည်ကအရေးများအတွက်ယောက်ျားတွေနဲ့ မဟုတ်ကြဘူးသောသူရတစ်လျှောက်အလွန်အနှင့်အတူကောင်းစွာဆန့်ကျင်ဘက်လိင်သို့မဟုတ်၊အထွေထွေအတွက်၊နှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်။ ငါ့အမိသူ့ကိုယ်ရေးအသေးစားဇာတ်သင်တတ်နိုင်သမျှပင်အလေ့အကျင့်များ၏ရှေ့မှောက်၌အမှန်နှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ရသောရွေးချယ်စရာများ၊သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အတွက်၊သင့်လျော်သော၊နှင့်အဒါဟာပိုကောင်းမယ့်မထင်အကြောင်း။ ထို့အပြင်၊ကအလျော်:သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလွန်းဖရန့်ကသည်အဘယ်သို့သောနေဆဲအမည်မသိသင်မှတစ်ဦးသောသူအားဖြင့်၊အဘယ်သူမျှမနှင့်ဟုတ်ကဲ့၊အားလုံးမိန်းကလေးများအဖို့အဆင်သင့်ရှာ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးအတွက်ပထမဦးဆုံးမိနစ်အစည်းအဝေး။ ကောင်းမှပေါ်ရွှေ့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရေးပါပြီးနောက်ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယဆက်သွယ်ရေး၊ပထမဦးဆုံးသင်လိုအပ်ရန်ကန့်သတ်အထွေထွေသတင်းအချက်အသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်း၊ဝါ၊လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊ဟာသနှင့်အတူ။ ဒီဆက်ဆက်မဆိုးဖြစ်ရန်တောင်းပန်သည်ကိုပြသသင့်ရဲ့ရင်သားပြီးနောက်ချက်ချင်းစတင်စကားပြော၊ဒါပေမယ့်လည်းနီးပါးဆက်ဆက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတစ်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်။ အခါလေးကြိုးစားဖို့သို့အရများ၏အခန်းကဏ္ဍအခြားတစ်ယောက်အများဆုံးမကြာခဏအလန်ထီး၊သူအဆက်မပြတ်မျိုးကိုမိမိကိုယ်ကိုမ မင်းမဆုံးရှုံးပါဘူးထိုမျက်နှာဖုံး။ သင်ဆိုရင်ဆိုးမင်းသား၊အဆိုပါမိန်းကလေးချက်ချင်းဖွင့်လှစ်သင်မှတက်နှင့်လဲလှယ်ရင်ကောင်းရဲ့၊ရန်စတင်စဉ်းစား၏အမှားတစ်ခုခုကဲ့သို့မကြာမီသင်ထွက်အလေးပေးတဲ့။ ကိုယ့်သင်တန်း၏၊ဖြစ်နိုင်အကြောင်းပြချက်အတွင်း။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်ထွက်ဆွဲထားဖို့အတွက်အွန်လိုင်းဂိမ်းများ၊ထို့နောက်တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကြောင်းပြောပါ။ ဖြစ်ကောင်းသင့်အဖော်ကလည်းအသန်သို့မဟုတ်နီးစပ်ပါတယ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုယူပြီးပယ်ရေခဲပြင်စကိတ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဤသူမိန်းကလေးများလည်းတည်ရှိ။ အနည်းဆုံး၊သင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ဆိုရင်၊သင်တန်း၏၊ကြိုးစားကြည့်ဖို့။
ချိန်းတွေ့အမျိုးသားများအတွက်၊မိန်းကလေးများအတွက် ။ ဝစ်အင်တာနက်ကနေတဆင့်၊အဖြစ်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှိသည်သောကာလပတ်လုံးဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သငျသညျကွားနိုငျအများကြီးဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအကြောင်းနိဒါန်းအင်တာနက်ကနေတဆင့်သင်ကူညီပေးရှာတစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းစုေပါင္း ၅၈ အခါ၊ထောင်ကြာထက်လျော့နည်း။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍကကစားသေချာအတွက်အလိုက်ဖက်၏။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်စိန့်-ဝစ်-လ- ဖို့ကူညီသူမ၏သင်အမှန်တကယ်ရှိသည်တွေ့န်ဆောင်မှု၊နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးမည်ဟူသောဖွဲ့စည်းအများဆုံးအဆင်သင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာလိုက်ဖက်ဂိုးသွင်းများအတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသင်နှင့်နေရာချထား၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်အာင္ဆန္းလူးဝစ်လာမည့်အဆင့်အထိ၊နှင့်ကြောင့်ဖွင့် လုပ္ငန္းဆိုက်သည္အခမဲ့ျဖစ္သည္။ က်ား:၅၀ အသက်အနှစ်။အဲသည်အချိန်အကြာကြီးကောင်းသောအသက်တာမပါဘဲဟာသက။အလိုဆန္ဒတောရှာဖို့ကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီးများအတွက်အသက်တာ၏မေတ္တာနှင့်မျှဝေ၏အမှုကောင်းသားသည်မအတားအဆီးတစ်ခု။လူတိုင်းအတွက်။ လိုအပ်တဲ့အကြိုက်ဆုံးလူယောက်ျား၏အနှစ် ၄၀ ကျော်အရွယ်မှာ ၅၂။ ဦးစားပေး:ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု၊မြင့်မားတဲ့အဆင့်၊အထံတော်၏ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါ။ အကြှနျုပျတို့သညျအကောင်းတစ်ဦးစုံတွဲနှစ်ဦးမိန်းကလေးများ၊၃၅ နှင့် ၃၇ အသက်အနှစ်။ စေတနာအတူတူများအတွက် ၅ နှစ်ပေါင်း။ နှစ်ဦးစလုံးစီစဉ်မွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ကျနော်တို့အဘို့ရှာကြသည်:က်န္းမာေရး၊အားကစား၊အဘယ်သူမျှမမကောင်းတဲ့အကျင့်၏၊ပွါးအတွက်အဆင့်မြင့်ပညာရေး။ အားလုံးအခြားအသေးစိတ်အချက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်စာပေးစာယူအားဖြင့်ချိန်း။ ရှာဖွေနေများအတွက်ဂုဏ်မရှိဘဲလူတစ်ဦးမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ဖြစ်နိုင်ရင်နှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးစစ်သား၊မိသားစုစတင်။ ကောင်းသောအနံနက်အပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကို၏။ ကျွန်မဟာသာမန်လူတစ်ဦးနှင့်အတူဂန္ထဝင်လိုအပ်ချက်နဲ့အလိုဆန္ဒ။ အချိန်အများကြီးပါဘူးသွား။ ရေးပြီးတုံ့ပြန်မည်ရှိသည်သောသူတို့အားအပြန်အလှန်စာနာနှင့်ဘုံအကျိုးအကြှနျုပျတို့သညျတွေ့ဆုံရန်သွားခြင်း၊စကားပြောခြင်းကြင်ဖော်-ဤအစည်းအဝေးတွင် ။ ပီး၊အကောင့်သို့ယူ သဟဇာတနှင့်စွမ်းရည်ရှာတွေ့ဖို့တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်အင်တာနက်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအခမဲ့ရရှိနိုင်။ သာစည်းအဝေးများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။
၁။ တစ်ဦးကကြီးမားသောသုံးစွဲသူများ၏နံပါတ်။ တစ်ဦးဆံပင်ရွှေရောင်အလှအပနှင့်သားဖွား၊ကလေးတစ်ဦးအားကြီးသောယောက်ျားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသူ့ဇာတိမြို့အတွက်မခက်ခဲသည်။ ၂။ တွဲဖော်ရွေးချယ်ခြင်းစနစ်။ ပံ့ပိုးထားရာသာဓကများ၊ခွင့်ပြုသင်ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးသမ္မတလောင်းကျွမ်းရမှာနှင့်အတူနေသောသူတို့အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့။၃။ တွေးရင်း။ ဒါကြောင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပြီးနောက်များအတွက်မှတ်ပုံတင်သုံးစွဲသူများ၏အများစု၊လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်မွေးဖွားဖို့အသစ်အသိ နှင့်အခြားမြို့။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာ၊အနည်းဆုံး၊ရက်စွဲများအပေါ်သွား။ ရကျွမ်းသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာသိမ်းဖို့လုံလောက်ပါတယ်၊မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲ၊အရာသုံးစွဲဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့ရွေးချယ်စရာများ။။။။။ ပြီးတာနဲ့သင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးရိုရှာအတွက်မိတ်ဆွေများကိုအသုံးပြုအဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေး၊နှင့်အတူစကားပြောန်ထမ်းများ၊ဓါတ်ပုံများကြည့်နှင့်အများကြီးပို။ ပိုပြီးတက်ကြွဖြစ်ကြောင်း၊ပိုပြီးဖွယ်ရှိသင်ရှာတွေ့မှမိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်တစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ ၊မှာတည်ရှိသောအခြေအ ၊တောင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်နက်တစ်ဦးအဖြစ် ၁၂ စံပြမြို့အတွက်ကမ္ဘာ၏အဆုံးတွင် ၂၀၀၂။ လူနေမှုအဝိုင်းအားဖြင့်လှပသောရှုခင်းများနှင့်လမ်းသည်အထူးသဖြင့်ချမ်းသာသောအခါတစ်စုံတစ်ယောက်ကအနီးအနား။ သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်နားလည်ပြီးသင်ကူညီပံ့ပိုးအတွက်မည်သည့်အခြေအမလွယ်ကူပေ။ ရှာအမျိုးသားဝိညာဉ်တော်သည်သန်းပေါင်းများစွာတို့တှငျအ နေထိုင်သူများကိုကူညီလိမ့်မယ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒီနေရာမှာလူတိုင်းတွင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရှာတဲ့စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောအချစ်။.
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အဆင္ေမြင်ယောင်ကြည့်မရနိုင်ပါ၎င်း၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အွန်လိုင်း:ဆက်သွယ်ပြောဆို၊အမိန့် ကျွန်တော်ဝယ်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေနှင့်အချို့ပင်အတွေ့အမျိုးသားချင်းဝိညာဉ်။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သူအသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊များစွာသောလူမေဖို့တွန့်ဆုတ်တွေ့ဆုံရန်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌၊ဒါကြောင့်ဤလူနှင့်အတူတက်လာထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းဆက်သွယ်ရေး၏တူ၊အကစားတဲ့ကြောင်၊နည်းလမ်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စိုးရိမ်နှင့်စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်ကူညီရှာဖွေအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ဗီဒီယိုချက်တင်-အကစားတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အတော်လေးရိုးရှင်းစွာ:မျက်နှာပြင်နှင့်ကီးဘုတ်၊ဒါပေမယ့်ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊သင်သိအတိအကျဘာကိုသင့်ရဲ့ နဲ့တူလှပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အရေးတွေ့ဆုံသည့်အခါလူတို့ကြောင့်၊အတိအကြိမ်မည်မျှသင်ဖန်ဆင်းမယ့်အမှားအခါလူဆိုးထားဓါတ်ပုံပေါ်မှာသင့်ရဲ့စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်အဓိကဓာတ်ပုံနှင့်အတူသူတို့ကိုအခြားလူများ။ ဗီဒီယိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူတစ်-ဖော်ရွေမွတ္ထားတီထွင်သည်လူအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်ပြီးနောက်အသက် ၁၈။ အဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုလစဉ်အသုံးပြုကြသောချက်တင်အတွက်နည်းလမ်းအဖြစ်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး။ သို့သော်အရေးအပါဆုံးအရာသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘို့အကြည့်တစ်ဖက်နှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့၊ဤသည်ကိုလည်းကစားတဲ့သင်တို့အဘို့။ ကျွန်မတွေးမိလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးနှင်ထုတ်မည်သင်သည်ဤအချိန်။ စကားပြောလိမ့်မည်အများဆုံးအလွယ်တကူနှင့်အဆင်ပြေလမ်းအတွက်သင်ဆက်သွယ်ဖို့၊နှင့်ဤသည်၎င်း၏အရေးပါဆုံးနှင့်အရေးကြီးအားသာချက်။ ဟုမထင်ကြဗီဒီယိုစကားပြောသည်များအတွက်သာရည်ရွယ်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအပေါ်ဝဘ်၊အဆန့်ကျင်တွင်၊လူများစွာမွေးဖွားပေးပါရန်ရိုးရှင်းပြီးအစည်းအဝေးဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားများအမျိုးမျိုးအပေါ်သစ်များ၊အတတ်ပညာ၊နိုင်ငံရေး၊သဘာဝ၊မျှဝေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်၊ရှာတွေ့ခရီးအားဖြင့်အကျိုးစီးပွား၊နှင့်တော့။ ဟုတ်ပါတယ်၊တစ်ဦးအချစ်ဗား၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဖယ်ကျဉ်မထားပေ၊တစ်ဦးတယောရာခိုင်နှုန်းကိုဖန်တီးခဲ့ကြသူအစုံတွဲများတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုရှိခြင်းတွေ့အသီးအသီးအခြားအင်တာနက်ပေါ်မှာ။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ ဒီေနရာကိုသာတွေ့တဲ့မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှအခမဲ့၊ဒါပေမယ့်လည်းအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်ဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိင်ဆက်ဆံ။ လည်းရှိပါတယ်၊အွန်လိုင်းသတင်းစာတွေ၊အမျိုးမျိုးသောဖျော်ဖြေရေးကေးရှင်းများနှင့်အများကြီးပိုပြီးသင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ။တွေ့ဆုံစကားပြောရှာတွေ့၊တစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်အသစ်ဖြစ်စေလျက်၊မေတ္တာဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေ၊အဘို့မိတ်ဆွေတွေအပန်းဖြေမှုနှင့်ခရီးသွားလာပူးပေါင်း။ သင်သတိပြုမိကြပြီ။ ဒီေနရာကိုသာတွေ့တဲ့မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးလယ်ပြင်တွင်၊ဒါပေမယ့်လည်းအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်ဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိင်ဆက်ဆံ။ လည်းရှိပါတယ်၊အွန်လိုင်းသတင်းစာတွေ၊အမျိုးမျိုးသောဖျော်ဖြေရေးကေးရှင်းများနှင့်အများကြီးပိုပြီးသင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ။ အစည်းအဝေး၊လူမှုရေး၊ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်၊သစ်ကိုစတင်အချစ်ဆက်ဆံရေး၊မိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေဖို့ဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းအပေါ်ခရီးသွားလာ။ သင်သတိပြုမိကြပြီ။
တွေ့ဆုံရန်အမျိုးသားများအတွက်၊မိန်းကလေးများအတွက် ၊အင်တာနက်ကနေတဆင့်၊အဖြစ်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်း၏။ သူတို့ကရှည်လျားပြီးအစိတ်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သငျသညျကွားနိုငျအကြီး၏ဇာတ်လမ်း၊အဖြစ်မိတ်ဆက်စကားမှတဆင့်အင်တာနက်ကိုကူညီရှာဖွေဖို့တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အနာဂတ်အတွက်ဖန်တီးရန်တစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစု၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းစုေပါင္း ၅၈ အခါ၊ထောင်ကြာထက်လျော့နည်း။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍကကစားသေချာအတွက်အလိုက်ဖက်၏။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အမှန်တကယ်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်အား၊နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးမည်ဟူသောဖွဲ့စည်းအများဆုံးအဆင်သင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုလာလိုက်ဖက်ဂိုးသွင်းများအတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသင်နှင့်နေရာချထား၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက် အသစ်တစ်ခုအဆင့်၊နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်များမှာ။ လူအတော်များများရှိသည် အမျိုးသမီးရှိခဲ့သည့်ကာလအတွက်မိမိတို့အသက်တာသည့်အခါသူတို့ကအမှန်တကယ်အလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသိအညာဘက်လူကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးအားကြီးသောဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်မဖွံ့ဖြိုး။ အသွင်အပြင်၏လှပသောမိန်းကလေး:ဆံထုံး၊ကောင်းစွာဝတ်ဆင်နှင့်အတူ၊အလှအမူ၊အစွမ်းထက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှု။ သူမြင်သောအခါလူတို့အာရုံစိုက်ပေးဆောင်နေကြ၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးထပ်မံချိန်း၏ကိုတွင်သို့မဟုတ်အကျဉ်းစကားပြောဆိုကြည့်ရှုရန်အရပ်နှင့်အတူမရွှေ့ဘူး။ နှင့်၊နှင့်၏။ အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကံကောင်းပါစေ။ ကြှနျုပျတို့အကွောငျးနှင့်အစကားပြောဆိုချက်။ အမှန်မှာအတွက်ပြည်တွင်းရေးကိုအပည္နယ္၏မိန်းကလေးများကြောင်းရရန်ခက်ခဲသည်ကျွမ်းနှင့်အတူလူတ။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုတူညီတဲ့ခံစားချက်ကိုကာကွယ်တားဆီးရတဲ့အထဲကသင်သိရန်အသီးအသီးအခြား။ ကြည့်ကြရအောင်အလေးအဓိကအသောသူများ-စက်ဆုပ်ရွံရှာ၊မထီ၊ကြောက်ရွံ့၊နှင့်ဝမ်းနည်းမှု။ အဆိုပါမိန်းကလေးမှာရူလူ၊နှင့်ဦးခေါင်း ။ သူမမသိသေး၊ဒါပေမယ့်သူမကယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းဒီလူဖြစ်နိုင်တစ်ဦးအရက်သမား၊နှင့်ဤညံ့ဖျင်းဝတ်ဆင်ယောက်ျားသည်အလှူအကြောင်း၊အားလုံးရဲ့။ နှင့်၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ဤခံစားမှု၏ကြိုက်အကြတယ်ပေါ်အမျိုးသမီး၏မျက်နှာကိုလူသာမမြင်၊ဒါပေမယ့်လည်း၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အကြောင်းသိတယ်၏ရန်လိုသဘောထားဆီသို့ဦးတည်။ ဒါပေမယ့်ပြီးသားဖြစ်လာတဲ့အလေ့အကျင့်နှင့်အနည်းငယ်ထိန်းချုပ်မှုထဲက။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်အောင်မြင်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-လုံလောက်သောအမျိုးသမီး။ မျက်နှာပေါ်မှာ၊ဒီများသောအားဖြင့်အဖြစ်အလိုလိုကျင့်တစ်ခုကုန္သြယ္ဖက္နိုင္ငံမ်ားရဲ့အပြုံးသို့မဟုတ်မျက်နှာအမူအရာ။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကူအညီဒါေပမဲ့သတိထားမိမွာပါ။ ဒါဟာလျော့နည်းစေပေနှင့်၎င်း၏အရေးပါကြောင့်စေမည်အတွက်တူညီသောအနေအထား။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမလိုဆောင်သွားစေလိုကြောင်း။ နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အထိတစ်ဦးယောက်ျားနဲ့ထည့်သွင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်ရှေ့နေ၊ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောကြောက်ဆရာဝန်ပဲပျင်းစရာနှင့်နှောင့်အယှက်။ အမျိုးသမီး၊ဤအလိုလိုကျင့်ခြင်း၏ပုံစံအတွက်အသံအတွက်ဦးခေါင်းကေျပာသည္သြားအတူ၊ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူရှိလိမ့်မည်ကဲ့သို့သင်တို့အချိန်၊မမျှော်လင့်သောအဖြစ်ကောင်း၊ပေး၊စသည်တို့ကို။မှ၎င်း၏ပိုင်ရှင်၊အမျိုးသမီးနှင့်အတူဝမ်းနည်းဖွယ်စကားရပ်တွင်သူမ၏မျက်နှာ၊မျက်စိလျှော့ချ၊နှင့်အပဲ့။ လူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေး၏အမျိုးမျိုးရှိသမျှမျိုးကိုအကြောင်းပြသပြီမဟုတ်သေးကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့အတိတ်ဆက်ဆံရေး၊သူမ၏ဦးခေါင်း၌အိမ်မှာအတွေး:မကောင်းတဲ့ဘာမှမဖြစ်ပျက်ဒါကြောင့်၊တစ်ဦးအဟောင်းတွေတ၊အခြားမည်မဟုတ်၏စောင့်ရှောက်မှုယူသကဲ့သို့ငါ့ကိုအကယ်၍ငါသည်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကနေလမ်းလျှောက်အိမ်မှာအခြား အလေ့အကျင့်၊နှင့်အရူး။ တကယ်တော့၊ဤသူအပေါင်းတို့စိတ်ခံစားမှုအထွန်း၏အတွင်းအထီးကျန်ပြီးကြောက်မျိုးသမီးတစ်ဦး၏၊သူတို့ကအစောင့်ရှောက်အတွက်သူမ၏မျိုးသန့်ဇုန်။ ရတဲ့အထဲကကခက်ခဲဖြစ်တယ်၊ဒါပေမဲ့အတော်လေးလက်တွေ့ကျကျ။ စတင်သူများအတွက်၊သင်ရှိသည်သည့်အခါမကောင်းတဲ့အကြံအစည်အကြောင်းမသိလူများသေးသောအဆင်သင့်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အကြောင်းတာ့ေနှင့်ရွံ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ၊နှင့်အတူဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ နှင့်နှေးကွေးဆင်း။ နားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်သောဤမှားယွင်းတဲ့တရားစီရင်သောကြောင့်၊သူတို့အတည်ပြုပြောဆိုသည်မဟုတ်။ သင်တို့ကိုမသိရပါဘူး။ ဒီစမ်းသပ်မှုတစ်ခု၊အဆိုအရာအစည်းအဝေး၊အဘယ်မှာသင်သူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုပြီးလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်အဘယ်သူသည်သွင်းယူကြား ၄ နှင့် ၆၏၁၀-ချက်ဆွဲဆောင်မှု။ သေချာအောင်သူတို့ထဲကအများအပြားမဟုတ်အဖြစ်ဆိုးအဖြစ်စဉ်းစား။ ဟုတ်ကဲ့၊ဤအတွေ့အကြုံကူညီပေးပါမည်သင်ယူသိမှရရန်အသီးအသီးအခြားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ၊မလိုမုန်းထားခြင်းမရှိဘဲနှင့်ဖြစ်စေသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်ပြီးနောက်ဆက်သွယ်ရေး၊ဒါပေမယ့်မမီ။ အဓိကအုပ်ချုပ်ရေး၏ဤအတွေ့အကြုံစဉ်အတွင်းအစည်းအဝေးသည်မအောင်ရေရှည်အစီအစဉ်များအတွက်အမျိုးသားများ၊ဒါပေမဲ့ရိုးရိုး လူမှုရေးနှင့်ပျော်စရာရှိသည်။ နှင့်အောက်မေ့သတိရသောအမျိုးသားများကဲ့သို့အမျိုးသမီးသူ၏ငြိမ်ဝပ်နှင့်အကျိုးစီးပွား၊နှင့်ထွက်၏ဝမ်းနည်းမှု၊ပြီးအများကြီးအတွင်းတယ္။
၁။ သင်ခန်းစာကိုသိသောသူတို့အဘို့သူများသည်-၂။ ဗမာထဲတြင္ ၃ လ-၃။ မြန်မာ။ အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာများအတွက်အရင်ကဆိုရင်နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီး:အောင်မြင်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အနိုင်ငံခြားဘာသာစကားလိုအပ်သည်သာလေ့ကျင့်ဖို့ဒါဟာနေ့တိုင်း၊ဒါပေမယ့်လည်းအလေ့အကျင့်ကြောင့်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊သင့်နဲ့ဆက်သွယ်နာက္ထပ္အမှန်တကယ်အသက်တာ၌၊ဒါပေမယ့်လူများအဘို့အ၊ဤအအနာဂတ်စိတ်ကူးယဥ်သိပ္ပံဇာတ်လမ်း။ ဤသည်ကိုလည်းတစ်ချိန်ပြဿနာ၊နှင့်လူတိုင်းဘဝတွင်မော်စကို၊။ ဘတ်၊လူတိုင်းသည်သင်တို့ပြောဆိုရန်၊အထူးသဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအချိန်။ ဤပြဿနာကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းအားဖြင့်အနူးအတွက်အွန်လိုင်းချက်တင်ရပ်ဘာသာစကားလဲေအရပ်ကိုကြာ။ ရှိပါတယ်၊သင်ပြောနိုင်မှအသံနှင့်ပုံစံအတွက်အစာနှင့်ပင်ဗီဒီယို၊အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲ အတွက်လျှော့ပေါ့လေထုထဲမှာထိုင်ခုံပြီးနောက်ဖြတ်သန်းတစ်စောင်။ ငါထကောက်ပြီးအချို့သောအေးမြအွန်လိုင်းချက်တင်တိုးတက်လာဖို့။ အသံ၏ကစားတဲ့ကမ္ဘာအဝှမ်း ၁။ -ဗမာ-ရုရှအပဳႏိုင္မယ္။ နိုင်ငံတကာချက်တင်အတွက်ဗမာအလေ့အကျင့်များရှိအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမွေး။ စစ္ထဲတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအပလက်ဖောင်းအဘို့ဤခွင့်ပြု၊သင်အလုပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာမည်သည့်အချိန်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအမှတ်ဖြစ်ပါတယ် ရုရှားသည်ရုရှားကရန်လိုအပ်ပါတယ်အလွန်ကောင်းစွာသိသောကြောင့်၊လဲလှယ်အတွက်သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အနည်းငယ်အကူအညီမှအင်္ဂလိပ်ကနေရုရှား။ ၂။ ။ အခမဲ့ချက်တင်အတွက်တဲ့ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းနှင့်ဖလှယ်သည္အထွေထွေနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျကိုဘုတ်၊သင်သည်လည်းပိုပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများ။ အလွန်ဖော်ရွေအသိုင်းအဝိုင်း၊အများဆုံးလာ ရှိပါတယ်သည့်အခါပိတ်ပေါင်းစည်းချက်တင်အတွက်။ ဒီမှာခင်ဗျားပြောစိတ္တကြောင်း၊နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအလေ့အကျင့်တစ်ခုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့်အတူအခြားကျောင်းသားများနှင့်ဇင်ဘတ်။ ၃။ စကားပြောဗမာချက်တင်။ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ဒါဟာမသာဆက်သွယ်ရေး၊သင်သည်လည်းမှန်ကန်သောအသီးအသီးအခြား။ ရုရှား၊စပိန်၊အင်္ဂလိပ်၊ချက်တင်၊ဘာသာစကားဂိမ်း၊ချတ်အတွက်မင်၊ပင်အင်တာနက်ရေဒီယို။ သူတို့ဟာစိတ်ဝင်စားစရာဆောင်ပုဒ်:၄။ ဝက္စာမ်က္ႏ။ စာသားနဲ့ကြောင်သံနှင့်အတူဇာတိပီ။ တစ်ခုရှိပါတယ်အက္ပ္ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ချက်တင်။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒါဟာင့်၊နှင့်အတူရွေးချယ်စရာမရှိ။ ၁။ စကားပြောသည်အသက်ရှင်သောချက်တင်အဘယ်မှာရှိသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်တစ်ခုကွေ။ အခါမှတ်ပုံတင်၊သတ်မှတ်ပစ်မှတ်ဘာသာစကားများနှင့်ဘာသာစကား၊အသေးစား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-ကိုယ်စားပြုပြီး၎င်းအကျိုးစီးပွား။ မှတ်ပုံတင်ဖို့ပြီးနောက်၊ထိုပြခန်းများဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပြီးအလားအလာ ၊ကျနော်တို့ရွေးသင်တို့ကြိုက်လူနှင့်အတူ၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာအတွက်စာသား၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်လာလျှင်မိတ်ဆွေများ၊သင်ရှိသည်နိုင်ပါလိမ့်မည်အသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ရှိပါတယ်ပ်များနှင့်အ ။ ၂။ ရိုးရိုးဗီဒီယို၊အသံ၊စာသား၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူအမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်အရှည်အလေ့အကျင့်များရေးသားခြင်းနှင့်စကားပြော။ သင်သည်လည်းသင်ယူဘာသာစကားထက်အခြား။ ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် ၂၀၁၇၊ဤဝန်ဆောင်မှုထက်ပိုရှိပါတယ် ၂၅၇ ထောင်အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ၁၄၀ ကမ္ဘာ၏နိုင်ငံ၊အရာထက်ပိုရှိသည် ၉၀ ဘာသာစကား၊အများပြည်သူအထိုက်။ ၃။ တစ်ဦးမျှမျှတတအစွမ်းထက်၊ အက္ပ္ကိုအသံ။ ထက်အများကြီးပိုအရေးကိုအရုရှ။ သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အခိုကင်းသို့မဟုတ်ဘာသာစကားသင်ယူ၊နိုင်ငံသား၊အရပ်၏အနေ၊စသည်တို့ကို။ အဘယျသို့ကယ့်ကိုအအေးနှင့်ထံမှခြားပြီးကသတ်မှတ်အခြားချက်တင်သာစကားပြောဆိုမှုလမ်းညွှန်များနှင့်အဘိဓါန္နဲ့ရှင်းလင်းချက်၊မှတ်ချက်၊အထူးဒီဇိုင်းအတွက်အွန်လိုင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့။ ပဲနားထောင်ဖို့ဆိုဝါကျအဖြစ်အပြောအားဖြင့်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွေပြန်လုပ်ပါ။ သင်သည်လည်းပြောင်းလဲရိွေစကားကအခြေအနေ။ ကစားတဲ့စကားပြောတဲ့ဗီဒီယို၊စာသား၊အသံချက်တင်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်းလူ၊အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်းအဖော်မပါဘဲ။ ဒီမှာထိပ်တန်းရှိပါတယ် ၅ အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့သူများ:၁။ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာ၊ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချက်တင်ဆိုက်အတွက်အကွိမျမြားစှာဘာသာစကားအပါအဝင်ပြင်သစ်၊ဂျာမန်၊ပေါ်တူဂီ၊စပိန်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အရမ်းရှက်ဖို့စတင်စကားပြောချက်ချင်းနောက်သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်၊စတင်အတူတူ၊အဂိမ်းထဲမှာ။ သင်သည်လည်းရှာဖွေတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သူ၌တည်ရှိ၏။ စတင်ဆက်သွယ်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ၊တွင်ရုံပေါ်တွင်နှိပ်ပါနှင့်သင်အပြာ။ ပြီးနောက်၊သငျသညျကျပန်းစကားပြောနှင့်အတူတစ်ဦးကလူစိမ်း။ အချိန်တိုင်းနှိပ်ပါလာမယ့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်၊သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်ထံမှမက်ဆေ့ခ်ျများအခြားအမည်မသိလူတစ်ဦး၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်က်ပ္။ အခါသင်ဆက်သွယ်စကားပြော၊သင်သွားဖို့အတန်းအစား၏လူတို့နှင့်အတူစကားပြော။ အဘယ်မှာရှိဤသည်အခြေစိုက်စခန်းကင္မရာတည်ရှိ စိတ်ဝင်စားစရာ:ကတည်းကလူအသုံးပြုနေတဲ့ကမ်ဒီဆိုက်တွင်၊သင်မြင်သောသူဆက္သြယ္ေ။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်လူတစ်ဦးသင်တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်၊အဂၤါနောက်ထပ်ပြီးတော့သင်ချက်ချင်းချိတ်ဆက်ဖို့နောက်ထပ်အလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြည်ပပါဝင်သောစာရင်းတစ်ခုအေးမြ၏အင်္ဂါနှင့်တူတည္ေနရာ-အခြေခံသမ်သောဆက်သွယ်ဖို့သင်အသက်ရှင်သူကလူနှင့်အနီး။ ရှိပါကသင်သည်ဒုက္ခစတင်ပြီးစကားပြောနှင့်အတူအသစ်များတစ်စုံတစ်ဦး၊သင်တင်းမာမှုသက်သာရာကစားခြင်းအားဖြင့်ကလေးဇာေ ၊-တိုး၊၄ တန်းအတွက်သူတို့နှင့်အတူ။ ဤအားကစားပြိုင်ပွဲတွင်လည်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအခါသူတို့အကြိမ်ချင်ဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောင်းပြောဆို၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်လိုအပ်ပါတယ်။ ကတည်းကအဆက်မပြတ်စိ၊အသိုင်းအကဒီမှာအများကြီးအားကောင်းနှင့်လုံခြုံထက်၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ထို့အပြင်အပေးပျော်စရာဂိမ်းများကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ခိုင်မာသော၊ဒါဟာရရှိနိုင်အများအပြားဘာသာစကားများထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြင်သစ်၊ဒတျချြ၊ပေါ်တူဂီ၊ရုရှား၊စပိန်လိုကြကုန်အံ့ ဆက်သွယ်သူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သောကြောင့်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုရည်ရွယ်ဖန်တီးရန်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၊ဘီဗားရှင်းခွင့်ပြုမှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့မှအပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကိုအကြောင်းကြောင့်၊ကလူသငျသညျတွေ့ဆုံရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်၊အံ့သြဖွယ်၊ထူးဆန်း၊ငြီးငွေ့၊အရူး၊လူမှုရေးအလိမ္မာယောက်ျားတွေနှင့်၊ပိုပြီးသြဇာယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများ၊အရေအခြားအမှုအရာ၊သင်တစ်ဦးတွေအများကြီးရ။ ဘယ်တော့မှပျင်းရ-အတိုင်းအသစ်နှင့်မူထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်သင့်ရဲ့ကံကောင်း။ ဤအကြောင်းများကြောင့်၊ဒီအမျိုးအစားစကားပြောသည်လည်းခေါ်ဗီဒီယိုချက်တင်၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချက်တင်၏စိမ်းသို့မဟုတ်ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊စသည်တို့ကို။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်သိရဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပိုကောင်းနှင့်ထိတွေ့သူတို့နှင့်အတူ၊ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်:၁သက်ဝင်ကမ်။၂မူရင်းနှင့်ရွှင်လန်းသော၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းအပေါ်တစ်ဦးမျက်နှာဖုံးသို့မဟုတ်အဝတ်အစား၊ကစား၊သီခ်င္းဂိမ်းများနှင့်အတူသူတို့ကို၊သို့မဟုတ်မွေ့လျော်အဆိုပါဂိမ်း။ ၂။ လူထုစကားပြောဆက်သွယ်ထားသောနှင့်အတူလူများအလားတူအကျိုးစီးပွား။ ရှိပါတယ်ပ်များနှင့်အဘို့နှင့်။ သင်တို့ထံသို့သွားလျှင်ဤဆိုဒ်များ၊သွင်းကုန် ပွင့်လင်းအထင္မွာစာမျက်နှာ၊ထိုအခါ၌အရာက္ဇာတိုးချဲ့သည့်အခါသင်သွားကြဖို့အဘယ်မှာရှိဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီတားမြစ်သည်၊အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါကွန်နှင့်ရွေးထည့်ဖို့ဆိုက်ကိုစာရင်းစာမျက်နှာ။ ၆။ ၄-အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးတူညီတဲ့လူ။ သင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုအုပ်စုများ၊ဥပမာအားဖြင့်၊အဂၤလိပ္စကားေျဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်သာဇာတိအင်္ဂလိပ်စပီထည့်သွင်းလိမ့်မည်၊အရာပြီးနောက်သင်သူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို။
ဆန္ဒလူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ယူကရိန်းပါ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်နေရာအစည်းအဝေး၊ဆွေးနွေးမှုများ၊ဖျော်ဖြေရေး၊နှင့်ချစ်ခြင်း။ ယူပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ဗ်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊လေးစားယုံဂန္ထဝင်၏ဗိသုကာမြို့၊ရပ်တန့်ဘို့အခွက်ဖလားကိုကော်ဖီ၏အမွေ့လျော်၏တစ်ဦးအချပ်ဗ်စက်ဝိုင်းတွင်တဦးတည်းအများအပြားတင္မည္။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သာ ၊အော်သို့မဟုတ်နားထောင်ဖို့အခက်စတြာ။ ဟားကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ယူကရိန်းသမိုင်း။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အတွက်ဟစ်တနှင့်တွေ့ဆုံအသစ်တစ်ခုကိုရည်းစားကျော်ကော်ဖီခွက်ထဲမှာ ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကနေယူကရိန်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်လာဒီမှာဆက်နေရန်၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်လူမှုရေးရာဖို့ရှိသည်၊ပျော်ရွှင်စရာနှင့်လူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ ထက်ပို ၁၀၀၊၀၀၀ လူတွေပူးပေါင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနေ့စဉ်နေ့တိုင်း၊ဒါကြောင့်အများအပြားရှိပါတယ်မာမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေမှသူငယ်ချင်းများပါစေနှင့်။
အဂၤလိပ္ကစားတဲ့။ ကစားတဲ့-ခွင့်ပြုမယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သင်ဆက်သွယ်ဖို့ဝှက်သုံးပြီးဗီဒီယိုနှင့်စာသားအတွက်အသက်ရှင်သောချက်တင်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှကြွလာသောတစ်ကျပန်းနဲ့ရွေးချယ်စိမ်းနဲ့တင်တစ်အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူ။ မည်သည့်အခိုက်မှာဆက်သွယ်ရေး၏၊အသံုးျပဳသူမ်ား၏ထွက်ခွာနိုင်လက်ရှိအကြည့်အခြားအဘို့အကျပန်း ။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုနိုဝင်ဘာလတွင်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ၂၀၀၉ အမော်အန်ကျောင်းနှင့်ရရှိခဲ့ကျော်ကြားမှုအတွက်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၀ ပြီးနောက်၊အရေအမျိုးပွားနှင့်အတူဆိုဒ်များလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမွာင္ေ ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဖို့အတွက်ဖော်ပြထားရီအထိအဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားအရင်းအမြစ်ကိုမဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် ၈၀၇ ရက်ပေါင်း။
ချိန်းတွေ့နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက်၊မိန်းကလေးငယ်များအင်တာနက်ကနေတဆင့်အတူ၊များစွာသောအခြားသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်၊ရှည်လျားဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သငျသညျကွားနိုငျအကြီး၏ဇာတ်လမ်း၊အဖြစ်နိဒါန်းအင်တာနက်ကနေတဆင့်အကူအညီရှာတစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အနောက်ကိုဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစု၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းစုေပါင္း ၅၈ အခါ၊ထောင်ကြာထက်လျော့နည်း။ ဒါကပြဿနာ။ အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍကကစားသေချာအတွက်အလိုက်ဖက်၏။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ရှာဖွေကိုယ်အဘို့ အမှန်တကယ်တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်အား၊နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအရာအများဆုံးအဆင်သင့်ဖွဲ့စည်းတော့မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပေးလိုက်ဖက်တဲ့အကဲဖြတ်များအတွက်လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသင်နှင့်နေရာချထား၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုအဆင့်၊နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်များမှာ။ ခက်တွေ့ဖို့တစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ ၏သင်တန်း၊သင်ပြောနိုင်ဘာမှမနှင့်အရာအားလုံးကို၊အထူးသဖြင့်ဆိုရင်လူတွေမေးသင်အကြောင်းကိုယ်ရေးအတူအံ့အားသင့်ပုံမှန်။ ဒါေပမယ့္မင့္ကေ။။။ သင်စရာမလိုပါလျှင်ရဟန်းသည်သို့မဟုတ်တစ်ရသေ့၊အထီးကျန်တင်ရမယ်။ ကိုတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး၏အထီးကျန်အတွက်လက်ရှိအခြေအနေ၏အသက်တာအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူထက်မီ၊သို့သော်၊အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ပိုပြီးခက်ခဲ။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေ၊ငါတို့မိဘတွေ၊မခံမရပ်၏ရှေ့တွင်တီဗီေမာ္နီတာမ်က္ႏွာျတနေ့လုံး။ သူတို့ပါတီအစည်းအဝေး၊ခရီးမှထိုအရပ်မှ။ နည်းလမ်းများစွာရှာတွေ့မှတစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ လက်ရှိမျိုးဆက်အတွက်ဒီသဘောဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အများစုကနေထိုင်သူများ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်နီးချင်းမမြင်ဖူးသေးဘူးတဲ့။ ရှိမယ့်ဘယ်နေရာကိုမှသွား၊ဒါပေမယ့်ညာဘက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသည်သင်ဖို့၊ပြောဖို့သွား။ သူစိတ်ဝင်စားမှာအဆိုပါကုမ္ပဏီသည်။ အခါအဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးမားပြီးစင်ကြယ်သည့်မင့်၊ဒါကြောင့်အလွန်လွယ်ကူရှာဖို့တစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအင်တာနက်ကို။ သူအစွမ်းထက်သည်နှင့်ကြီးတွေ၊အသိတွေအများကြီးလျှင်မအရာအားလုံးကို။ နီးပါးအတွက်မိနစ်အနည်းငယ်၊သငျသညျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်သင်တို့အဘို့။ မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်း၊သင်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်တစ်ခုအဖြစ်အသစ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ပေါ်သည်ထင်ရှားမှာအဆိုပါကောင်တာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့အရေအလိုက္သက္ေ။ တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းသူတို့လိုချင်တဲ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊တစ်စုံတစ်ယောက်တစ်ဂိုး-အိမ်ထောင်နှင့်သားသမီး၊တစ်စုံတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခြင်းငှါအလိုတူလူဘုံအကျိုးစီးပွား၊ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုသည်ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အဖျြောဖွရေး။ ပြားပံုစံမ်ားတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြဘယ်သို့သောအသုံးပြုသူအတွေ့အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဒီနေရာမှာတှေ့နိုငျသောသူလူကိုက်ညီသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်၊ပုံသဏ္ဌာန်၊မျက်နှာအသွင်သဏ္ဌာန်၊ဆံပင်အရောင်၊ခန္ဓာကိုယ်အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အခြား။ သင်ဖတ်ပြီးပါပြီအများအပြားပံုစံမ်ား၊ဖော်ထုတ်အခြားမည်သူမဆိုထက်ပိုပြီး၊နိုင် စကားစတင်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အကြိုက်တဲ့အျနှုတ်ခွန်းဆက်။ ဒါကြောင့်၊ပိုပြီးနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ခင်လာမည့်အစည်းအဝေး။ အခြားသူများအားဖြင့်သွားချိန်းသည်နက်ဖြန်နေ့၌။ တစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်သွားရန်ပြည်နယ်အလတ်အချက်ပေးမီ၊တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အစည်းအဝေး-သင်ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းဖြင့်။ ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ က၏အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေနေသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်၊အကူအညီဖြင့်များ၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု။ နေရာတိုင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်အထူးသဖြင့်ရှိပါတယ်၊အများကြီးလိမ်လည်။ ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမှန်ဆိုဒီထက်ပိုအခြားဆိုက်များပေါ်တွင်။ ဒါပေမယ့်မအကြောင်းရင်းကိုစတင်ရန်ဤစိတ်ကူး။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်ရနိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်သွယ်တဲ့လူ။ အခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ဖို့အချစ်တဦးတည်း။ ဒီတစ်ခါလည်းသူမည်မဟုတ်တစ်ကျွန်းစုနှင့်အထောက်အပံ့များအတွက်သင်၌အရာရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကောင်းတစ်ဦးအဆွေခင်ပွန်း။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမကြာခဏဖြစ်ပျက်။ ဟုတ်ကဲ့။ အများစုကအမျိုးသားနှင့်မိန်းကလေးများကိုတွေ့ကြပြီအချစ်မှာ။ သူတို့အတူတကွနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ဂရုစိုက်ပညာေရးမိမိတို့၏ကလေးများ။ ဘာမှမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မကြာခဏရှာတွေ့မှတစ်ဦးကိုခစျြတစျခု၊သင်လိုအပ် ချိန်အများကြီးဖြုန်း။ ဒါကြောင့်မပါဘဲမပြည့်စုံအတွေ့အကြုံနှင့်ကျရှုံး။ ဒါပေမယ့်သင်ရှာလိုလျှင်၊သင်ချက်ချင်းပဲသိကြပါလိမ့်မယ်ကြောင့်အမကြီးအားလုံးအချည်းနှီး။ ကလွဲရင်ဒီအခုတော့လုံးဝအမှန်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအခမဲ့။
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသည်လူအဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အခြားလူတစ်ဦး။ အရမ်းကွာခြားစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဘုံအကျိုးစီးပွားနိုင်သွားအမဲလိုက်၊ငါးဖမ်း၊သို့မဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်ဘောလုံးပွဲများသူတို့နှင့်အတူ။ သို့သော်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ဘာမှမမဖြစ်နိုင်ဘူး:ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူအကြံဉာဏ်၊သင်ကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေလူငယ်တစ်ဦးသည်လူ။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်မက်ဆေ့ခ်ျများကလိင်နစ္မှကွဲပြားခြားနားသောမြို့။ သင်ရုံအမြင်အပေါ်ကြော်ငြာတွေ သင့်လျော်သောအဘော်သို့မဟုတ်ပင်ပို့စ်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌၊အလွန်မြင့်မားနှစ်လိုဖွယ်ထည့်သွင်းရန်အနီးကပ်တက်ပုံကိုသူ့ကို၏ရှင်းလင်းတိကျသောအကျိုးစီးပွားနှင့်ပန်းတိုင်၏အစည်းအဝေး။ အကူအညီဖြင့်ဤကြော်ငြာ၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမှန်နှင့်သစ္စာဘဝလက်တွဲဖော်သို့မဟုတ်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ပွောငျးနှီးအစည်းအဝေး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတစ်ဦးချစ်စရာအနှိပ်ကုထုံး။ ဆွဲဆောင်မှုလူငယ်အလွယ်တကူရှာဖွေချမ်းသာတဲ့လူကိုဆက်သွယ်မှုများအတွက်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါအလေး၊ငါဖြစ်၏၃၀ အသက်အနှစ် ၁၈၀-၇၅-၁၅ အဘို့အရှာနေတဲ့လူအတွက်သိပ်အစည်းအဝေးအပေါ်အခြေခံပြီး၊လေပိုကောင်းလေမှာတောင်ပိုင်းပိုင်နက်၏။ မင်္ဂလာပါ၊ငါအလက်ဇန်းဒါးလိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအမျှအတွေ့အကြုံထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကို၊၊ငါယခင်ကလုံးဝကိုပြုခြင်းငှါမကြိုးစားပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်လျှင်။ ငါအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်၊သို့သော်ဤမျှဝေးတွင်သာငါ၏အကြံအစည်။ ကျွန်တော်မစမ်းသပ်ချင်တယ်၊ငါပြုချင်ကြပါဘူးအတွေ့အကြုံရရှိနေသူများရှိသည်။ သွာနှင့်ကျန်းမာရေးပထမဦးဆုံး၊အဘယ်ကြောင့်သူတို့မဝံ့သေး။ မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ် ၅၁။၁၈။၀။၇၁။၁၆။၄ ပိန်နှင့်အတူ အသေးစားဗိုက်။ ငါရှာနေတာပါအတွက်စွယ်စုံ။ ။ သင်ကြား ၃၀၅၀ အသက်အနှစ်။ အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်နိုင်သည်မှာအဆိုပါဟိုတယ်၏တန်းတူငွေပေးချေမှု။ အစည်းအဝေးကျနော်တို့အတူတကွခဲ့။ ဘာမှ။ အဘယ်သူမျှမအရက်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်မသောက်။ သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမဟုတ်သောအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအတွက်။ သာတတ္သည္။ အတွက်လဲလှယ်အတွက်ဓာတ်ပုံေပးပါ။အမည္၊ဖော်ပြပါဘာသာရပ့်အဆင့်လူအဘို့ရှာဖွေနေပါသည်၊ထက်မပိုငါ့ကိုငါ ၃၆။ ငါပါးလွှာ၅၈ ကီလိုဂရမ်၊ဓါတ္ေ ၁၇၀။ နေရာမရှိရှိပါတယ်အစည်းအဝေး။ ပထဝီ၊ငါ၏တောင်ဘက်တွင်မော်စ။ သင်ပေးပါဗျာသင့်ရဲ့ကြော်ငြာကနေအဆုံး၏အဆင့်အတန်း။ ဈေးနှုန်းများမတြက္သာျဖစ္သည္။ သင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်အတိအကျစျေးနှုန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့အော်ပ။
တွေ့ဆုံပြီးဒီနေရာမှာနှင့်ယခုဘဲ၊မှတ်ပုံတင်နှင့်အခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တစ်ဝက်သာ ။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများ၊မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ထည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊မိုဘိုင်းဖုန်းများများအတွက်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအဖွဲ့ဝင်များကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့သစ်အစည်းအဝေးတွင်အတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ လက်ထပ်သည်အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအသီးအသီးတွေ့ဆုံရန်အခြားမရှိဘဲ၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခုအချိန်မှာအခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေအတွက်ပုတ်ခတ်။ နှင့်ချက်တင်၊အွန်လိုင်းကြည့်ရန်သူတို့၏ဓာတ်ပုံများ၊နှင့်နိုင်သူတို့ကိုခေါ်ရန်ဖုန်းပေါ်မှာ။ ထိုအယူ၏အားသာချက် ၁၀၀ အင်္ဂါ၏ဆိုက်မှတ်ပုံတင်ရအခမဲ့အသုံးျပဳအားလုံးအခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ၊နေရာသစ်အစည်းအဝေးများနှင့်အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များအကြားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအရပ်ကိုယူ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျေးဇူးတင်စကားစစ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကိုဂရုသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်တစ်ဦးကဓာတ်ပုံ၏မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊သူတို့ကိုတွေ့ဆုံရန်နှင့်ပင်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအောင်။ ပါ။
Teen love filmak - best love filmak
ကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ မိန်းကလေး ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦး ကျပန်းဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘယ်မှာတွေ့တဲ့မိန်းကလေးက သိမှရ ၄၅
© 2022 ဗီဒီယိုချက်တင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့!